အိမ်ထောင်မပြုဘဲ မိဘအိမ်မှာပဲ ပျော်ပျော်ကြီးနေသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက် - CeleLove
July 15, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်အချစ် 0
အသက်အရွယ်တစ်ခုရလာရင် အိမ်ထောင်ပြု၊ သားသမီးယူပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ၀လေး တည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေး လူတိုင်းမှာ ရှိကြမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း လက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုရင် သင်ထင်ထားတာနဲ့အများကြီးကွာဟနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ တစ်ကိုယ်တည်းဘ၀မှာတော့ မသိခဲ့ပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုရင် ကြုံတွေ့လာရမယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …
(၁) တာဝန်တွေပိုလာမယ် ”
မိဘအိမ်မှာ နေတုန်းတော့ သင်နေချင်သလို (အမှိုက်တွေ ဆိုဖာပေါ်မှာ ပုံနေမယ်၊ တနေကုန် ဘာမှမလုပ်ပဲ TV ထိုင်ကြည့်ချင်ကြည့်မယ် ၊ ကော်ဖီဆိုလဲ သင်တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပဲ ဖျော်သောက်မယ်)နေလို့ရပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေ လုံးဝရမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ အလုပ်က ပြန်ရောက်ရင်တောင် ဟင်းချက်ဖို့ စပြင်ဆင် ၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ် ၊ အ၀တ်လျော် အိုး …. အလုပ်တွေမှတောင်ပုံရာပုံ ပါပဲနော် …။
ရည်းစားဖြစ်စအချိန်တွေမှာ ချစ်သူနှစ်ယောက် တစ်ပတ်ကို ၃၊ ၄ ရက်လောက်တွေ့ဖြစ်ကြရင်တောင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ရမနေနိုင် လွမ်းကြ ၊ ဖုန်းတွေဆက်ကြနဲ့သာယာခဲ့သလောက် အိမ်ထောင်ကျပြီးရင်တော့ ဒီမျက်နှာကြီးပဲနေ့တိုင်းတွေ့ ၊ ရန်တွေဖြစ်ကြနဲ့ ငါတို့အရင်က ချစ်ခဲ့ကြတာရောဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် တွေးမိလာပါလိမ့်မယ် …။
(၃)ငွေကြေးအတွက် မှီခိုရမယ် ”
တစ်ကိုယ်တည်းသမားဘ၀မှာတော့ ကိုယ်ရှာတာကိုယ်သုံး ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ TGIF ခဲ့ပေမယ့် လက်ထပ်ပြီးရင်တော့ နှစ်ယောက်ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် စုရ၊ ဆောင်းရ ၊ ခင်ပွန်းမျက်နှာ ကြည့်ရနဲ့ သူုငယ်ချင်းတွေကြားမှာတောင် ကပ်စီးကုပ်ကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် …။
သင့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးလာမှာကတော့ အသေချာပါပဲ။ တစ်ချို့အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေဆို လမ်းထိပ်မှာကော်ဖီလေး ထွက်သောက်ဖို့တောင် ခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ် ။ Night out ဖို့ဝေး ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်လတစ်ခါလောက် ဆုံဖို့အရေး တစ်နှစ်လောက် ချိန်းရတာတွေပါဖြစ်လာမှာပါ …။
အရင်တုန်းကတော့ သင့်မိဘတွေ မကြိုက်တာမလုပ်ရင်ကိုပဲ တာဝန်ကျေတဲ့ သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ သင့်ခင်ပွန်း ၊ သင့်ရဲ့ ယောက္ခမတွေ ၊ သင့်ခင်ပွန်းဘက်က မောင်နှမတွေ ၊ သူ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုပါ ရောက်သွားမှာပါ ။ သင့်ခင်ပွန်းကခွင့်ပြုရင်တောင် သူ့မိဘတွေက မကြိုက်လို့ ၊ ဆွေမျိုးတွေကကဲ့ရဲ့မှာမို့လို့ စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့မို့ မြိုသိပ်ရမယ့် သင့်ဆန္ဒတွေ ၊ လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ၊ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ခင်မင်မှုတွေ များလာပါလိမ့်မယ် နော် …။ ။
အိမျထောငျမပွုဘဲ မိဘအိမျမှာပဲ ပြျောပြျောကွီးနသေငျ့တဲ့ အကွောငျးအရငျး (၅)ခကျြ
အသကျအရှယျတဈခုရလာရငျ အိမျထောငျပွု၊ သားသမီးယူပွီး ပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝလေး တညျဆောကျကွမယျဆိုတဲ့ စိတျလေး လူတိုငျးမှာ ရှိကွမှာပါ ။ ဒါပမေယျ့ တကယျတမျး လကျထပျလျိုကျပွီဆိုရငျ သငျထငျထားတာနဲ့အမြားကွီးကှာဟနတောကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ ။ တဈကိုယျတညျးဘဝမှာတော့ မသိခဲ့ပမေယျ့ အိမျထောငျပွုရငျ ကွုံတှလေ့ာရမယျ့ အခကျြလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော …
(၁) တာဝနျတှပေိုလာမယျ ”
မိဘအိမျမှာ နတေုနျးတော့ သငျနခေငျြသလို (အမှိုကျတှေ ဆိုဖာပျေါမှာ ပုံနမေယျ၊ တနကေုနျ ဘာမှမလုပျပဲ TV ထိုငျကွညျ့ခငျြကွညျ့မယျ ၊ ကျောဖီဆိုလဲ သငျတဈယောကျတညျးအတှကျပဲ ဖြျောသောကျမယျ)နလေို့ရပမေယျ့ အိမျထောငျပွုပွီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုအခှငျ့အရေးတှေ လုံးဝရမှာမဟုတျပါဘူး ။ အလုပျက ပွနျရောကျရငျတောငျ ဟငျးခကျြဖို့ စပွငျဆငျ ၊ အိမျသနျ့ရှငျးရေးလုပျ ၊ အဝတျလြျော အိုး …. အလုပျတှမှေတောငျပုံရာပုံ ပါပဲနျော …။
ရညျးစားဖွဈစအခြိနျတှမှော ခဈြသူနှဈယောကျ တဈပတျကို ၃၊ ၄ ရကျလောကျတှဖွေ့ဈကွရငျတောငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတှရေ့မနနေိုငျ လှမျးကွ ၊ ဖုနျးတှဆေကျကွနဲ့သာယာခဲ့သလောကျ အိမျထောငျကပြွီးရငျတော့ ဒီမကျြနှာကွီးပဲနတေို့ငျးတှေ့ ၊ ရနျတှဖွေဈကွနဲ့ ငါတို့အရငျက ခဈြခဲ့ကွတာရောဟုတျရဲ့လားလို့တောငျ တှေးမိလာပါလိမျ့မယျ …။
(၃)ငှကွေေးအတှကျ မှီခိုရမယျ ”
တဈကိုယျတညျးသမားဘဝမှာတော့ ကိုယျရှာတာကိုယျသုံး ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ TGIF ခဲ့ပမေယျ့ လကျထပျပွီးရငျတော့ နှဈယောကျဘဝရှရေ့ေးအတှကျ စုရ၊ ဆောငျးရ ၊ ခငျပှနျးမကျြနှာ ကွညျ့ရနဲ့ သူုငယျခငျြးတှကွေားမှာတောငျ ကပျစီးကုပျကွီး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ …။
သငျ့ရဲ့လှတျလပျမှုတှေ ဆုံးရှုံးလာမှာကတော့ အသခြောပါပဲ။ တဈခြို့အိမျထောငျရှငျအမြိုးသမီးတှဆေို လမျးထိပျမှာကျောဖီလေး ထှကျသောကျဖို့တောငျ ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးတဲ့သူတှရှေိပါတယျ ။ Night out ဖို့ဝေး ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တဈလတဈခါလောကျ ဆုံဖို့အရေး တဈနှဈလောကျ ခြိနျးရတာတှပေါဖွဈလာမှာပါ …။
အရငျတုနျးကတော့ သငျ့မိဘတှေ မကွိုကျတာမလုပျရငျကိုပဲ တာဝနျကတြေဲ့ သမီးတဈယောကျဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ခုတော့ သငျ့ခငျပှနျး ၊ သငျ့ရဲ့ ယောက်ခမတှေ ၊ သငျ့ခငျပှနျးဘကျက မောငျနှမတှေ ၊ သူ့ဆှမြေိုးတှရေဲ့ ထိနျးခြုပျမှုအောကျကိုပါ ရောကျသှားမှာပါ ။ သငျ့ခငျပှနျးကခှငျ့ပွုရငျတောငျ သူ့မိဘတှကေ မကွိုကျလို့ ၊ ဆှမြေိုးတှကေကဲ့ရဲ့မှာမို့လို့ စတဲ့အကွောငျးပွခကျြတှနေဲ့မို့ မွိုသိပျရမယျ့ သငျ့ဆန်ဒတှေ ၊ လကျလှတျလိုကျရတဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ၊ ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ ခငျမငျမှုတှေ မြားလာပါလိမျ့မယျ နျော …။ ။
ဘဝမှာအခက်​အခဲတခုခုကြုံလာရင်တ​နေ့ (၉)ပတ်​စိပ်​ပြီး (၉)ရက်အဓိဋ္ဌာန်​ဝင် ပုတီးစိပ်​နည်း​လေး​ပါ…